Herbalism - Guides WoW | WoW Guides
Mpitsabo raokandro manangona zavamaniry manerana an'izao tontolo izao hampiasa azy ireo amin'ny asa hafa toy ny alchemy na soratra. Tena tadiavina ny zavamaniry ao Azeroth.
Torolàlana momba ny herbalma amin'ny ady ho an'i Azeroth: làlan'ny fiompiana tsara indrindra
Aloha! Amin'ity torolàlana momba ny Herbalism ao amin'ny Battle for Azeroth ity dia hampiseho aminao ny làlana tsara indrindra hiompiana amin'ny sari-tany ...
Herbalism amin'ny ady ho an'i Azeroth
Salama daholo. Androany aho mitondra aminao ny vaovao momba ny asa Herbalism amin'ny Battle for Azeroth. Tafio ny ...
Torolàlana momba ny fitrandrahana legioma - fitaovana
Aloha! Ny fanasitranana amin'ny legiona, toy ny sisa amin'ireo asa, dia novaina tamin'ny lafiny maro. On…
Asa fitoriana herbalism ao Legion
Aloha! Tongasoa eto amin'ny tari-dalan'ny misiona Legion Herbalism. Amin'ity toro-lalana ity izahay dia mitondra anao ny iraka rehetra sy ...
Draenor Herbalism Guide 1-700 Nohavaozina 6.2
Aloha! Tongasoa eto amin'ny torolàlana Draenor Herbalism izay hanampianay anao hahatratra ny ambaratonga 700.
Torolàlana momba ny herisetra 1 - 600
Ity torolàlana ity dia hampianatra anao ny fomba haingana indrindra hampiakarana ny asan'ny Herbalism anao manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 600. Ity torolàlana ity dia ahitana ny làlana mankamin'ny faritra tsara indrindra feno zava-maniry. Ny Herbalism dia mandeha tsara amin'ny alchemy, azonao atao ny mampiasa ny ahitra angoninao hanaovana potion, fa ny Herbalism dia tsara amin'ny asa hafa rehetra. Ataovy ao an-tsaina fa ity torolàlana ity dia natao hampisondrotana haingana ny Herbalism anao, ka indraindray ny ahitra hambolenao dia mety tsy ny tsara indrindra ho an'ny Alchemy.
Torolàlana momba ny herisetra 1 - 450
Ity torolàlana ity dia hanoro anao ny fomba haingana indrindra hampitomboana ny asanao Herbalism manomboka amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 450. Havaozina ho patch 3.2
Ny torolàlana dia misy làlana amin'ny sarintany amin'ireo faritra tsara indrindra misy ahitra. Herbalism mifanaraka tsara amin'ny asa ny simia satria azonao atao ny mampiasa ny ahitra angoninao mba hanaovana potion, fa tsy io irery no ilaina satria misy ny hafa toa azy Inscripción izay azo atambatra tsara koa. Ny torolàlana dia hampiseho ny sarintanin'ireo faritra ahafahanao mahita ahitra bebe kokoa. Saingy afaka misafidy faritra fanangonana hafa toa tsara kokoa aminao ianao, izay tianao bebe kokoa na misy olona vitsy kokoa.
Ampirisihina hampiasa addon ho an'ny toerana misy ny zavamaniry. Ny malaza indrindra dia ny Mpivory, io dia mitazona ny toeran'ny zavamaniry efa nangonina ary raha mameno azy amin'ny angona iray izahay dia hilaza amintsika ny toerana misy ireo zavamaniry ao anaty tahiry.
Aza very eo amin'ireo voninkazo.